Però: Niverenan’ny tondra-drano indray ny faritra Cusco · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2018 2:42 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Nederlands, Deutsch, বাংলা, English
(Marihina fa tamin'ny 8 Martsa 2010 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Rehefa noheverina fa nihatsara ny toe-draharaha nateraky ny orana sy ny tondra-drano tany Cusco, Però sy ny faritra manodidina azy dia tondraka indray ny renirano iray hafa noho ny oram-batravatran'ny 1 Martsa (2010). Nahafatesana olona miisa 7 ny fahatondrahan'ny Reniranon'i Quesermayo tao amin'ny distrikan'i Taray, Faritanin'i Calca any amin'ny faritra Cusco ary naratra maro sy 80% n'ny trano no tratran'ny tondra-drano tao amin'ity faritra ity . Niantraika tamin'ny lalambe mampifandray an'i Cusco sy Pisac ihany koa izany. Ny fahatongavan'ny ny fanampiana haingana kokoa no nampiavaka ity tondra-drano ity tamin'ny tondra-drano hafa teo aloha ary tonga niaraka tamin'ny fanampiana ara-tsakafo milanja 3 taonina ny Minisitry ny Angovo sy ny Harena An-kibon'ny Tany ny andro nitrangan'ny voina.
Sary avy amin'i Marco Moscoso ary nahazoana alàlana .
Na izany aza, niantraika tamin'ny tanànakely hafa ihany koa izany araka ny tatitra, toa ny tany Cuya sy Yacarpay, ary nisy ny fanambarana ny hamehana tany amin'ireo distrikan'i Cusco, toa tany San Sebastián, San Jerónimo, Anta, Zurite, Limatambo ary Lamay. Toy ny nitranga nandritra ny voina teo aloha, tamin'ny alàlan'ny Twitter no tena nahitana ny ankamaroan'ny vaovao sy ny sarin'ireo zava-nitranga.
Marco A. Moscoso (@markopunk):
Tondraka noho ny fisondrotry ny renirano i Taray any Calca
Mandrahona ny mbola hitohy ao Cusco ny orana, nitohy nandritra ny alina ny orana omaly ary tonga indray ny olana rehetra, maro ny ankizy no tsy handeha hianatra .
Raha niverina tamin'ny làlana Cusco – Pisac aho, tsy afaka nandeha nihoatra ny 30 kilaometatra intsony, tazana fa tondraka tanteraka i Taray
Na dia voasakana aza ny làlana sasantsasany, dia nahavita nankao amin'ny faritra ihany i Moscoso ao amin'ny bilaogy El Caminerito. Naka sary izy ary navoakany tao amin'ny Twitpic ny sasany tamin'izany. Naka horonantsary ihany koa izy ary nandefa izany tao amin'ny bilaoginy rehefa niverina tany Cusco:
Nisy ny asa fanadiovana natao androany niaraka tamin'ny fanohanan'ny Tafika Peroviana, ary nanomboka tamin'ny fanoratana anarana ireo niharam-boina sy ny fizarana sakafo ihany koa izany nandritra izany. Rehefa niverina tany Cusco tamin'ny alàlan'ny lalambe Pisac – San Salvador, dia hita fa vaosakan'ny fihotsahan'ny tany avy amin'ny havoana fantatra amin'ny anarana hoe Morro Blanco ny lalambe, ary tsy maintsy mamakivaky ny saha sy ny fotaka ny olona mba hiampitana izany.
Nandray anjara tamin'ny lahatsary iray tao amin'ny bilaogy Prensa Contacto ihany koa izy :
Afaka nandrakitra ny fanambarana nataon'i Ciriaco Condori, Ben'ny tanànan'ny faritanin'i Calca izy ireo ao amin'ny bilaogy Prensa Contacto voalaza etsy ambony:
Tsy manana kolontsain'ny fisorohana isika, ary nitranga tamintsika tampoka izany. Manao fifampiraharahana amin'ny Ben'ny tanànan'i Pisac izahay mba hamindrana ireo fianakaviana tra-boina ho any amin'ny faritra sasany iadidiany. Tokony hanome alalana ny fividianana milina mavesatra ho an'ny tanàna ny governemanta foibe.
Farany, nandefa saripika sy lahatsary tao amin'ny bilaoginy momba ny zava-nitranga tany amin'ny làlambe mampitohy an'i Cusco sy i Pisac, izay niharan'ny herisetran'ny natiora ihany koa i Javier Murillo avy ao amin'ny bilaogy El Pensador (Lasa Eritreritra), izay tsy afaka nankany Taray:
Dikantsoratr'i Eduardo Ávila